मेयर विधासुन्दरलाई एक नेपालीको चिठी ! - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
प्रकाशित मिति: १ आश्विन २०७४, आईतवार September 17, 2017
आदरणीय मेयर ज्यू
तपाईको एक सय एक दिन पूरा भईसकेको छ। म सोच्दैछु तपाईलाई मेयर भएकोमा बधाई दिउँकितपाईले आफ्नो बोली पूरा गर्न नसक्नु भएकोमा आलोचना गरौं। तपाईले विश्वकै सुन्दर शहर बनाउने भनिएको काठमाण्डौ अहिले विश्वकै कुरुप र प्रदूषित शहर बन्दैछ। पानी परेको बेला हिलो र पानी नपरेको बेलाधुलो नै राजधानीको मूख्य विशेषता भईसकेको छ। हुन त हामीलाई यी धुलो र हिलो अनि खाल्डा खुल्डीको राम्रो बानी परिसकेको छ। तरपनि तपाइले विश्वकै नमुना शहर बनाउँछु भन्नु भएकोले त्यो नमुना शहर कस्तो हुँदो रहेछ भनेर थाहापाउने ईच्छा तिब्र रुपमा मनमा जागेको मात्र हो। तपाईले भने अनुरुप नै तपाईले जिते दिनदेखि म पनि तपाईको एक सय एक दिनको गिन्ती गर्दै बसेकी थिएँ तर एक सय एक दिन बित्दा हातमा लाग्यो सुन्य भने झै भयो।
दिनहू माईक्रो बसमा यात्रा गर्दा गर्दा टेलिभिजनमा मात्र देखेको मेट्रो र मोनो रेल पाँच बर्ष भित्रमा चढ्न पाउने भयौं भनेर मन फुरुङ्ग भएको थियो। हुन त यो रेल ल्याउने सपना अरु नेताहरुले पनि नदेखाएका हैनन् तर पनि तपाई अरुभन्दा पृथक हुनुहुन्छ भन्ने विश्वास थियो। बाहिर जाँदा र आउँदा बाटोको अवस्था देखेर दिक्क भएका नेपालीहरुलाई ठूलो आशा थियो तपाईले चिल्लो बाटो बनाउनु हुन्छ भन्ने तर आशा जति निराशामै परिणत भयो।
तपाईको नाम जति राम्रो छ त्यति नै राम्रो काम पनि होलाभन्ने लागेको थियो। तपाईको गफअसाध्यै मिठो थियो। सोचेका थियौं कामपनि मिठो होलातर हामी सारा नेपाली जनता भ्रममा पो रहेछौं। कठै! तपाईलाई भोट गरेर जिताउनेहरु कति पछुताउँदा हुन् निअहिले। चुनाव अगाडि तपाइले बनाउने भनेको ‘स्मार्ट सिटी’ त अहिले ‘ईस् मार्ट सिटी’पो भएको छ त।
तर यी सबै कुराले तपाईलाई के फरक पर्ला ? काग कराउदै गर्छ पिना सुक्दै गर्छ कि कसो मेयर ज्यू ? काठमाण्डौ स्मार्ट सि.टी नभए पनि तपाईको हातमा स्मार्ट फोन त छदैंछ अनि चढ्नलाई १ करोडको गाडि छदैंछ। एकदिन सामान्य नागरिकको जिवन बाचेर हेर्नुस् मेयर ज्यू अनितपाईलाई थाहा हुन्छ अरुलाई सपना देखाएर पूरा नगर्दा कस्तो महसुस हुन्छ।
तपाईकै कार्यकाल अवधिमै एउटी अवोध बालिकाले ढलभित्र बगेरआफ्नो ज्यान गुमाउन पुगिन्। त्यसको जिम्मेवार को ? तपाईबाट मात्र सपना देखाइयो अनि नेपालीहरुलाई मूर्ख बनाइयो तर काम केही पनि भएन। तपाईले एउटा मात्रै परिवर्तन गरेर देखाउनुभएको भए सायद विश्वास गर्थे होला नेपालीजनताले तपाईंलाई।
तपाईले बनाउन खोजेको स्मार्ट सिटी झन् झन् डम्ब हुदै गयो। खै के सोचेर गफलाउनु भो ? तपाईले यी १०१ दिनभरी एक दुई पटक कुच्चो हातमालिएर फोटो खिचाउनबाहेक अरु केही गर्नुभएन। न बाटो बनाउन सक्नु भो न जनताको मन जित्न नै। जनतालाई स्मार्ट सिटी बनाएर देखाउने आश्वासनदिदैं अन्त्यमा आएर सबै कार्य नगरपालिकाको टाउकोमा थुपारिदिनु भयो हैन त ? तपाईले त देश विदेश भ्रमण गरिसक्नु भयो होला। के त्यस्ता विकसित देशहरु घुमिसक्दा तपाईलाई कहिल्यैपनि नेपाललाई त्यस्तै शहर बनाउँ जस्तो लागेन ?
अंग्रेजीमा एउटा भनाई छ नि ‘इट्स नेभर टु लेट’ हो,अझैपनि केही ढिलो भएको छैन। तपाईले आट्नु भो भने राजधानीअझैपनि ‘स्मार्ट सिटी’ बन्न सक्छ। त्यसैले गफ हैन मेयर ज्यू अब काम गरेर देखाउनु होस्। काठमाण्डौलाई छिट्टै ‘स्मार्ट सिटी’ को रुपमा यो आखाले देख्न पाईयोस् भन्दै अहिलेलाई विदा चाहन्छु।
तपाईको पिडित नागरिक